Microstation: ubeko lokuprinta-iGeofumadas
Ikhaya/Microstation-Bentley/I-Microstation: indlela yokuprinta
Ukwenza oku nge-AutoCAD kunenye ingcinga, kwaye yiyo loo nto abanye xa bezama ukuyenza ngeMicrostation banobunzima. Kwelinye icala, kuba akukho luncedo lukhulu kwindlela yokwenza kwaye nendlela yokwenza ayifani nje ne-AutoCAD.
Ngenxa yoko, siya kwenza umsebenzi, nangona ndibonisa ukuba imigaqo ethile eyisiseko ye-Microstation iyancipha xa ingazange isetyenziswe.
Imephu yemodeli kunye nephepha
Imodeli yindawo yokusebenza, eyi-1: 1, apho itsalwa khona. Umzekelo endiwubonisayo yimephu ye-cadastral kwaye umbono osondelayo kukusondela kwesalathiso esingumxholo, zonke zakhiwe ngaphezulu kwemodeli.
Ishidi, (iphepha) yinto ekuthiwa yi-AutoCAD, kwaye ilingana nebhokisi enxulunyaniswa nobungakanani bephepha esilindele ukuprinta kulo. Esi sisikali, kuba imodeli iya kuhlala ingu-1: 1
Injongo kukudala imephu ephumayo, enebalazwe yangaphandle, imephu yangemvelaphi, isibonakaliso ekunene kunene kunye nendlela ekhohlo kwicandelo lesangqa, njengoko kuboniswe kulo mzekelo:
Kwifashoni yakudala, abo bangaziyo ukuba basebenzise njani oku kusebenza benza iibhloko (iiseli), ikopi, isikali, ukusika, kunye nokwenza izinto ukwenza yonke into kwimodeli. Into engathandekiyo kukuba ukuba uza kwenza uhlengahlengiso kwimephu yoqobo, akukho nto yenziwe yayiluncedo.
Indlela yokwakha uMgaqo
Ukwakha oku, sisebenzisa umsebenzi owaziwayo yencoko yababini, okanye ibhokisi lemodeli, elandela umyalelo ngiselo. Ukuba ayibonakali, cofa ekunene kwaye yenziwe isebenze, njenge Umphathi okhawulezayo.
Kulo mzobo, ufana kakhulu nezikhombisi, ngokuba ingcamango yileyo, fowuni imephu, enye okanye enye yangaphandle, ichaza isilinganisi, yenza i-figure cut and place them in frame frame.
Into yokuqala kukwenza iphepha, oku kwenziwa ngeqhosha elitsha kunye nemiba enje: Uhlobo lwephepha, ukuba likubukhulu obu-2 okanye obu-3, igama lemodeli, isikali sezichasiso, isikali somgca womgca,
Indlela yokwakha ilungiselelo
Apha izixhobo zisebenza ngokungathi ubusebenza kwimodeli, amaxande, imigca, iimilo, iitekisi. Yonke into iyafana, kwiinguqulelo ezisuka ku-8.9 eyaziwa ngokuba yi-Microstation XM elubala iyaxhaswa.
Ulwakhiwo lulula: Uxande olungezantsi, ikota yokujikeleza, ooxande abancinci ababini. Ke ngesixhobo sokwenza imimandla imingxunya yenziwe ngumahluko.
Unokunika umbala wesiqhelo kwizinto, udlale ngokucacileyo kunye nokuphambili ukuze ubone ukuba yiyiphi ehamba phambili okanye ngasemva.
Ngokufanayo, kule nto unako ukudala amanqaku eenkcukacha zeprojekti, umlinganiselo, inombolo yephepha, ulungelelanisa igridi, ijelo, njl njl.
Faka imephu kwizinto
Iimephu zilayishwa njengezalathiso kwibhokisi yemodeli, amaxesha ngamaxesha njengoko kulindelwe ukubizwa kwizinto. Ngamnye wabo unegama elinengqiqo kunye nesikali esisebenza kwiphepha lokushicilela. Oku kuvumela ii-2 / 3D zooms ukuba zibizwe kwizikali ezahlukeneyo kwiphepha elinye, kwaye ngezantsi kubonelela ngesitayile sokubhaliweyo kunye neempawu zokulinganisa, ukubonakala kwe-raster okanye iipropathi ze-3D zePDF.
Le mephu iwela ndaweni ithile, ke senza ikopi yomfanekiso esinethemba lokusika kwaye sibeke ngqo emephini. Kwimeko apho ubungakanani bubonakala ngathi, siyakucofa ngokuchanekileyo kwaye silungelelanise iipropathi ngokutshintsha isikali. Emva koko ukwenza ukusika sisebenzisa i-icon yesikere kwaye sibambe umzobo.
Emva koko into enqunywe ngayo yonke into kunye nomfanekiso ungashukunyiswa kwimephu, kuboniswe kwinto elandelayo.
Eminye izama nje, ukuzama, ukwenza iimpazamo kwaye uqhubeke uziqhelanisa de ufumane indlela. Ukufowuna ireferensi, chaza isikali, khetha into yokusika, ikliphu, indawo emephini. Iziphumo ezilandelayo zibonisa ubume bomzekelo osele uhlanganisiwe.
Kwimeko yegridi yemephu ye-cadastral, bekungayi kuba yimfuneko ukuqala iimephu zokugqibela zokuprinta, kodwa endaweni yoko, iimodyuli ezizezakho ziya kwakhiwa emaphepheni anegama elifanelekileyo kunye nee-quadrants ezinendawo yomdla ngasemva. Kwimeko yamanani athile ale mephu njengenombolo yebhloko yommelwane, banokutsalwa kulwakhiwo ukugcina itoology kwimodeli.
Ndiyabonga nina bahlobo, inxaxheba enkulu
Sawubona, kusasa ekuseni, ndidlulisa ezinye iinkcazo ezicacileyo zendlela yokuhambisa indiza kwi-Microstation 🙂
Andiyazi indlela yokwenza imodeli indawo kwi-MicroStation V8.
Ndiyathemba ukuba unokunceda.
Eminye yale nkqubo ichazwe ngokucacileyo kwinqaku:
Ukukwazi ukuba imidwebo eyenziwa ngabantwana yinto enomfanekiso wefomathi EYAQALA (ewe, i-Raster!)